Isticmaalka Qalabka Kaydka Google si Loogu Saaro Xogta - Khabiirka Cilmiga ah
A sawir gacmeed waa warqad otomaatig ah oo ururiya xogta goobaha durugsan, oo u oggolaanaya isticmaalayaasha dhammaadka in ay wax ka beddelaan macluumaadka laga helay qaabka la adeegsan karo. Xaqiiqdii, mid ka mid ah wuxuu heli karaa macluumaad kasta isaga / iyadu u baahan tahay shabakadda. Dhibaatadu waxay tahay in la soo saaro macluumaadka qaababka si sahlan loogu maareyn karo loona falanqeyn karo.
Qalabka Google Google
Google kordhinta xawaaraha Chrome ayaa ah shabakadda webka oo ka shaqeeya browser browser. Iyadoo kordhintani, uma baahnid inaad kireeysato kumanaan caawiye ah si aad nuqul uga dhigto bogga intarnetka oo dhan. Xulo bartilmaameedka-qoraalka oo ha u ogolaadaan in kor looqaado Chrome si loo sameeyo inta kale.
Tirada wanaagsan ee kooxaha muwaadiniinta waxay u shaqeeyaan inay qabtaan mas'uuliyadahooda xisaabtan iyaga oo hoos udhigaya kharashkooda. Ballaarinta xawaaraha Chrome waxay u ogolaaneysaa inay u dagaalamaan daahfurnaanta iyo xisaabtanka iyagoo ururinaya xog dhab ah oo ku saabsan hawlgallada xukuumadaha. Kaararka xogta laga helo webka iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka gacanta ayaa noqon kara hawl adag. Ka dhig ololahaaga xajinta waxtar badan adigoo ku rakibaya shabakad wareejinta shabakadda barta shabakadaada.
Sida loo rakibo kordhinta rikoorka Chrome?
Google kordhinta chrome scraper waa qalab aad u sarreeya oo shabakad ah oo lagu bixiyay bilaashka dukaamada webka. Si aad u rakibtid waraaqaha ku yaala shabakadaada, riix "Add to Chrome" oo lagu soo bandhigay dhinaca midigta sare ee shabakada kore ee Chrome. Marka la rakibo, qalabku hadda waxaa laga helayaa badhanka badhanka 'browser'.
Sida loo isticmaalo qalabka Google Sawirista?
Qaar ka mid ah jadwalka xogta webka waxaa loo wareejin karaa webka illaa falanqeynaha loo isticmaali karo mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, helitaanka macluumaadka bogagga internetka ee qaababka la adeegsan karo waxay u baahan yihiin dadaal dheeraad ah. Tababarkan, jaantusyada Guddiga Mareykanka ee Qiimaynta iyo Isdhaafsiga (Foomka 2015-Foomka 2015-Foomka 2015-ka) ayaa loo isticmaali doonaa si loo muujiyo sida loo kordhiyo xogta Chrome ee macluumaadka bogagga iyo bogagga.
Si loo soo saaro xogta laga helo goobaha adeegsiga qalabka Google, oo tilmaamaya bogga shabakada. Xaaladdan, fiiri miisaska. Dooro safafka lagu xoqayo dabadeedna riix icon naqshadda geeska midigta ee shabakadaada oo dooro "Gawaarida isku midka ah. "
Furaha" Speed ​​Scraper Extension "ayaa ku wareejin doona xogta xoqista daaqad cusub. Mashiinkaaga ayaa sidoo kale aqoonsan doona magacyada jaantuska miiska saaran. Hubi xogta la soo helay si loo hubiyo in si habboon loo soo saaray. Riix 'Copy to clipboard' kadibna furo Microsoft Excel. Xogta ku dheji xogtaada adoo gujinaya "Ctrl + V. "
Ka hor inta aanad falanqeynin macluumaadka ku saabsan xaashidaada xisaabinta, waxay hoos ugu dhejisaa madaxa hogaamiyayaasha meelaha ay ku habboon yihiin. Isku-dheji khadadka faaruqa ee ku yaala Microsoft Excel si aad u hesho xog dhab ah. Isticmaal macaashka miisaanka Excel si aad u hubiso in wadarta lacagaha xaashidaada ay sax tahay.
Goobta Google ee xoqista ayaa ka dhigaysa jimicsiga ururinta xogta inay noqoto mid la heli karo oo aad u fudud. Warshadku waxay kordhisaa saxnaanta xogta macluumaadka webka iyo tayada wax-ku-oolka ah ee ku siinaya fursado dheeraad ah si aad u-eegto qiimahaaga. Isticmaal tilmaantan kor ku xusan ee loogu talagalay dawladaha xayeysiiska bogagga shabakadaha iyo helitaanka xog dhab ah daahfurnaanta Source .